China Highway Guardrail Made in China orinasa sy mpanamboatra | Kejulixin
Ny guardrail dia vokatra vy vita amin'ny hatsiaka mahazatra.
Waveform Guardrail Fampidirana
Waveform guardrail henjana sy malefaka, manana fahaiza-manao matanjaka mitroka angovo fifandonan'ny, manana tsipika tsara ny fahitana induction asa, azo mandrindra amin'ny lalambe tsipika endrika, endrika tsara tarehy, fahasimbana dia mora ny manolo. Waveform guardrail noho ny simenitra guardrail manana permeability sasany, miaraka amin'izay koa dia manana toetra ara-teknika somary ambany vidiny, dia azo ampiasaina ho an'ny ambony fepetra aesthetic ny lalana sy ny tany efitra, oram-panala faritra.
Fitsipika momba ny hetsika Waveform Guardrail
Corrugated beam guardrail no tena endriky ny semi-henjana guardrail, dia koronosy vy guardrail lovia spliced ​​sy tohanan'ny ny tena tsanganana ny rafitra mitohy. Mampiasa ny fototry ny tany, ny tsanganana, ny fiovaovan'ny taratra izy io mba hisakanana ny herin'ny fifandonana, ary hanery ny fiara mitsoaka hanova lalana, hiverina amin'ny lalana mahazatra, mba hisorohana ny fiara tsy hivoaka ny arabe. Ho fiarovana ny fiara sy ny mpandeha dia ahena ny fatiantoka vokatry ny loza. Corrugated beam guardrail vy sy malefaka, manana hery matanjaka mitroka angovo fifandonana, manana tsipika tsara ny fahitana induction asa, azo mandrindra ny lalana endrika, endrika tsara tarehy, azo ampiasaina amin'ny radius curves kely, fahasimbana dia mora ny manolo. Ny guardrail beam waveform mitambatra dia azo ampiasaina amin'ny divider afovoany tery. Ho an'ny fiara miampita ny arabe (tetezana) any ivelany, dia mety hiteraka voka-dratsy lehibe amin'ny fizarana, dia afaka misafidy ny hanamafy orina ny onjam-beam guardrail.
Ny tombony amin'ny Waveform Guardrail
Waveform guardrail manana fiantraikany tsara fanoherana, vidiny ambany, ela velona, ​​anti-corrosion fampisehoana, fiarovana. Avo kokoa, maitso, fametrahana mora sy haingana ary tombony hafa. Ny arabe onjam-peo guardrail plate dia avo lenta amin'ny alàlan'ny fitsaboana anti-corrosion.
teo aloha: Orinasa Rafitra vy avo lenta